ကွံကွံဖနျဖနျ အစားအသောကျလိုကျပို့တဲ့အလုပျကိုမှ ခဉျြခွငျးတကျမိတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီး
Home News ကွံကွံဖနျဖနျ အစားအသောကျကို ဆိုငျကယျနဲ့ လိုကျပို့တဲ့အလုပျကိုမှ ခဉျြခွငျးတကျမိတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီး
ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှေ ခဉျြခွငျးတကျတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ တတှေ ကွားဖူးကွမှာပါ။ သာမနျအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျကာလအတှငျးမှာ ခဉျြခဉျြငံငံ စပျစပျတှကေိုမှ စားခငျြတာမြိုး၊ အခြို့သူတှဆေို ဆေးလိပျပွာကို လြှာနဲ့တို့ပွီးစားခငျြတာမြိုးတှတေောငျ ရှိဖူးကွပါတယျ။
ဒီလို အခြိနျမြိုးဟာ အိမျထောငျသညျအမြိုးသားတှအေဖို့ အရမျးကို ခေါငျခွောကျရသလို၊ တကယျ့ကို ဂရုစိုကျကွငျနာတတျတဲ့ အမြိုးသားတှဆေို အရမျးလညျး ပငျပနျးရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ခဉျြခွငျးတကျတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှေ အမြားစုက သူတို့ စားခငျြတာမြိုးဆို အခုခကျြခွငျး မဖွဈဖွဈအောငျ ဖနျတီးယူခိုငျးနလေို့ပါပဲ။
ဒါပမေဲ့ အခု မလေးရှားက ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးကတော့ သူမြားတှလေို အစာစားခငျြတာမြိုးမဟုတျဘဲ သူခဉျြခွငျးတကျတာက အဆနျးပါ။ သူဟာ အစားအသောကျတှကေို ဆိုငျကယျစီးပွီးလိုကျပို့ရတဲ့ Delivery အလုပျကို လုပျခငျြကွောငျး ခငျပှနျးဖွဈသူကို ပူဆာခဲ့ပါတယျ။ ခငျပှနျးဖွဈသူလညျး မလှနျဆနျနိုငျတဲ့အဆုံး GrabFood အလုပျကို သှားပွီး မိနျးမအတှကျ Delivery တဈခါလောကျလုပျဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
Hai laa isteri.. Org mengandung ngidam nk makan sedap2.. Ko ngidam nk bawak grab dah knp ??? layan kan je laa.. Egt satu order je!!! ??? @zlfhnzulkifli pic.twitter.com/bEn9hiA53O
မိနျးမဖွဈသူကလညျး တဈကွိမျသာလုပျဖို့ ကတိပေးထားပွီး အလုပျက ကွညျကွညျသာသာ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ အစားအသောကျ မှာတဲ့ဆီကို မိနျးမဖွဈသူက ဆိုငျကယျကိုယျတိုငျမောငျးပွီး သှားပို့ခဲ့ပါတယျ။ စိတျမခတြဲ့အတှကျ လမျးတဈလြှောကျလုံး ခငျပှနျးဖွဈသူကနောကျထပျဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ လိုကျလံ စောငျ့ရှောကျပေးခဲ့ပွီး မှတျတမျးတငျ ဗီဒီယိုလေးပါ ရိုကျထားခဲ့ပါတယျ။
ပွီးတဲ့အခါ ဒီအဖွဈအပကျြလေးကို သူ့ရဲ့ Twitter အကောငျ့မှာ မြှဝရေငျး အကျတာနကျသုံးစှဲသူတှကွေား လူပွောမြားလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကြံကြံဖန်ဖန် အစားအသောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်ပို့တဲ့အလုပ်ကိုမှ ချဉ်ခြင်းတက်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ချဉ်ခြင်းတက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းမှာ ချဉ်ချဉ်ငံငံ စပ်စပ်တွေကိုမှ စားချင်တာမျိုး၊ အချို့သူတွေဆို ဆေးလိပ်ပြာကို လျှာနဲ့တို့ပြီးစားချင်တာမျိုးတွေတောင် ရှိဖူးကြပါတယ်။
ဒီလို အချိန်မျိုးဟာ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေအဖို့ အရမ်းကို ခေါင်ခြောက်ရသလို၊ တကယ့်ကို ဂရုစိုက်ကြင်နာတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဆို အရမ်းလည်း ပင်ပန်းရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ အများစုက သူတို့ စားချင်တာမျိုးဆို အခုချက်ခြင်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူခိုင်းနေလို့ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အခု မလေးရှားက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကတော့ သူများတွေလို အစာစားချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူချဉ်ခြင်းတက်တာက အဆန်းပါ။ သူဟာ အစားအသောက်တွေကို ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလိုက်ပို့ရတဲ့ Delivery အလုပ်ကို လုပ်ချင်ကြောင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ပူဆာခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူလည်း မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အဆုံး GrabFood အလုပ်ကို သွားပြီး မိန်းမအတွက် Delivery တစ်ခါလောက်လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိန်းမဖြစ်သူကလည်း တစ်ကြိမ်သာလုပ်ဖို့ ကတိပေးထားပြီး အလုပ်က ကြည်ကြည်သာသာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အစားအသောက် မှာတဲ့ဆီကို မိန်းမဖြစ်သူက ဆိုင်ကယ်ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး သွားပို့ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မချတဲ့အတွက် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကနောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ လိုက်လံ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုလေးပါ ရိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတဲ့အခါ ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှာ မျှဝေရင်း အက်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကြား လူပြောများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleဆားခါး ကိုသုံးပွီး ဝိတျကစြမေယျ့ နညျးလမျး (၅)ခု
Next articleသငျမွငျဖူးမှာ မဟုတျသေးတဲ့ ဉာဏျကွီးရှငျတှရေဲ့ Desktop Wallpaper မြား